Pers प्रेरणादायक डिजिटल मार्केटिंग रणनीति तपाईंको प्रदर्शन बढावा दिन - Semalt विशेषज्ञ चासो
डिजिटल मार्केटिंग ईमेल विज्ञापन, एसईओ, अनलाइन विज्ञापन, सामाजिक मीडिया र वेबसाइट डिजाइन शामिल गर्दछ। यसले स्थानीय व्यवसाय मालिकहरूलाई चुनौती प्रस्तुत गर्दछ जो केवल उनीहरूको साइटहरूमा अधिक आँखाका चित्रहरू लिन चाहन्छन्। सामान्यतया, यी व्यवसायीहरू उनीहरूको व्यवसायका लागि उत्तम मार्केटिंग दृष्टिकोणमा अनुसन्धान गर्न पनि व्यस्त छन्।
यस सम्बन्धमा, Semalt का वरिष्ठ ग्राहक सफलता प्रबन्धक निक Chaykovskiy, महत्वपूर्ण डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरूको विस्तृत वर्णन गर्दछ जुन कुनै पनि व्यवसायले २०१ 2017 मा अपनाउन सक्दछ। स्थानीय व्यवसाय मालिकहरू जस्तै वकिल, दंत चिकित्सक, डाक्टरहरू, र विश्रामकर्ताहरू रणनीतिहरू अत्यन्त उपयोगी पाउनेछन्।
१. दिमागमा राख्नुहोस्, तपाइँको साइट एक परिवर्तनीय "मुस्ताang" हो।
डिजिटल मार्केटिंग को हरेक पक्ष व्यापार वेबसाइट को लागी एसईओ इन्टरनेट यातायात ड्राइव गर्न पर्छ। यसलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्नुपर्दछ। धेरै वेबसाइटहरू एक अनुत्तरदायी डिजाइनको साथ सिर्जना गरिएको थियो जसको मतलब तिनीहरू मोबाइल जस्ता उपकरणहरूमा नेभिगेट गर्न चुनौतीपूर्ण छन् र अनौंठो देखिन्छ। अनुसन्धानले देखाउँदछ कि ग्राहकको यातायात को of 43% मा मोबाइल उपकरणहरु बाट आउँछ आंकडा वृद्धि को प्रक्षेपण संग। यसैले, एक व्यापार साइट मोबाइल ग्याजेटहरु मा एक सजिलो नेविगेशन संग अपील गर्नु पर्छ। आगंतुकहरूले ईमेल मालिक वा फोन नम्बरमा क्लिक गर्न सक्षम हुनुपर्दछ व्यापार मालिक वा व्यवस्थापनलाई सम्पर्क गर्नका लागि। थप रूपमा, यदि ग्राहकले सम्पर्क लेख्नुपर्‍यो भने कम्पनीले उनीहरूलाई मोबाइल अनुकूलित साइटहरूको प्रतिस्पर्धीहरूसँग हराउने सम्भावना छ। त्यसकारणले विचार भनेको आगन्तुकहरुलाई ईटरमा ईमेल, फोन कल वा वाक-इनमा रूपान्तरण गर्नु हो।
२. वेबसाइटमा "समृद्ध उत्तरहरू" कार्यान्वयन गर्नुहोस्।
व्यक्तिहरू अब परिवर्तन गर्दैछन् कसरी उनीहरू Google लाई प्रयोग गर्छन्। आगंतुकहरु अब जानकारी खोज्न चाहँदैनन् तर गुगललाई सोध्छन् कि तिनीहरुका प्रश्नहरुको उत्तर दिन। एक कम्पनीको रूपमा, गुगलले आफ्नो खोज एल्गोरिथ्ममा "धनी उत्तरहरू" पेश गरेर र एसईओ अनुभव सुधार गर्न यस अवसरमा लगानी गरेको छ। यो अधिक सही परिणाम प्रदान गर्दछ। यस सन्दर्भमा कुनै पनि स्थानीय व्यवसाय मालिकसँग साधारण प्रश्नहरू हुन्छन् जुन उनीहरूले क्लाइन्टहरूबाट प्राय: जवाफ दिन्छन्। यसैले, यो एक व्यवसाय वेबसाइट मा समृद्ध उत्तरहरू लागू गर्न उज्जवल हुनेछ कि तिनीहरू गुगलमा प्रश्न सोधिन्छ जब तिनीहरू पहिले देखा पर्दछ।
Social. सोशल मिडियाको विवेकपूर्वक प्रयोग गर्नुहोस्।
स्पष्ट रूपमा, प्राय जसो स्थानीय व्यवसायहरू सामाजिक च्यानलहरू प्रयोग गर्ने निर्णय गर्ने बेलामा अड्किएका छन् र कसरी पोष्टि। गर्नुपर्दछ। एउटा महत्त्वपूर्ण नियम भनेको तपाईको ग्राहक आधार बुझ्नु हो। सामाजिक मिडिया नयाँ अवधारणा होइन। तपाइँको ग्राहकहरु लाई सुचारू गर्न, अन्य सामाजिक मिडिया विशेषज्ञहरु संग शुरू गर्नुहोस्। यसका अतिरिक्त, सामाजिक मिडियामा पोष्टिंगले वफादार ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्नुको अलावा व्यवसायको लागि आवाज मात्र सिर्जना गर्दछ। यसैले, एक उद्यमी सावधानी अपनाउनु पर्छ प्रचार र विशेषको साथ साइटलाई अधिक भार नदिन।
Email. ईमेल मार्केटिंगमा ध्यान केन्द्रित रहनुहोस्।
केहि वर्ष अघि, ईमेल मार्केटिंग सामाजिक मीडिया मार्केटिंगको लागि मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि अलग राखिएको थियो। जहाँसम्म, प्रायः स्थानीय व्यवसायहरूको लागि, ईमेल मार्केटिंग भनेको ग्राहकहरूसँग सञ्चार गर्ने सस्तो र राम्रो प्रविधि हो। इन्स्टाग्राम र फेसबुकले अनुयायीहरूको एक अंश मात्र पोस्ट गर्दछ। अधिक व्यक्तिहरूमा पुग्न उनीहरूलाई एक भुक्तानी आवश्यक पर्दछ। एक उद्यमीले नयाँ मेनू आईटमहरू, घटना जानकारी र विशेष प्रयोग गर्न बिना ईमेल प्रयोग गरेर पठाउन सक्दछ। मेलचिमपको प्रयोगले व्यवसाय मालिकलाई २,००० सम्पर्कमा सन्देश पठाउन अनुमति दिन्छ जुन एक प्रभावी मार्केटिंग प्लेटफर्म हो।
निष्कर्षमा, स्थानीय व्यापार मालिकहरूले लगातार उनीहरूको व्यवसाय वेबसाइटहरू हेर्नुपर्दछ पक्का गर्नका लागि कि सम्पर्क जानकारीहरू कार्यरत छन्। अन्य डिजिटल मार्केटिंग रणनीतिहरू तब लागू गर्न सकिन्छ साइटमा यातायात चलाउन।